घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू फ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरू Moussa Dembele बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
माउसा डेम्बेलेको हाम्रो जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुनु, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेप मा, एक फ्रान्सेली फुटबल जीनियस उपनामको इतिहास वितरण "Hunskelper“। Lifebogger आफ्नो शुरुआती दिन देखि शुरू हुन्छ, जब उनी प्रसिद्ध भयो। तपाइँलाई मोसा डेम्बेलेको बायोको आकर्षक प्रकृतिको स्वाद दिनको लागि, यहाँ उनको जीवनको चित्रण सारांश छ।
फ्रेन्चको माउसा डेम्बेलेको जीवन र उदय।
हो, सबैलाई थाहा छ सर्वोच्च-प्रतिभाशाली छ, राम्रो हमला गर्ने वृत्ति, स्थिति को भावना र लक्ष्य को लागी एक आँखा संग एक शिकारी।। यद्यपि केवल थोरैले मोसा डेम्बेलेको जीवनीलाई ध्यान दिन्छ जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
मौसा डेम्बेले बचपन कहानी - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि:
मोसा डेम्बेले जुलाई 12th 1996th दिनमा जन्मेकी थिइन् उनका बुबाआमाको दोस्रो सन्तानको रूपमा पोंटाइजमा, पेरिसको उत्तरपश्चिमी उपनगर, फ्रान्सको कम्यून। उनका बाबुआमा एक पटक पिरवारको मूलका साथ आप्रवासी थिए जसलाई मालीको पश्चिमी अफ्रिकी देश पत्ता लगाइएको थियो।
माउसा डेम्बेले तपाई फ्रान्समा जन्म लिनुभयो, उनको परिवार मालीबाट आएको हो
दुबै आमा बुबा, 1990s को शुरुवातमा आफ्नो देश बसाई फ्रान्समा भेटे र पेरिसको उत्तरमा पोंटाइजको सानो गाउँमा बिहे गरे। पोन्टोइज पेरिसको उपनगर हो जहाँ प्राय: फ्रान्सको लागि आफ्नो देश छोड्ने मालीयन आप्रवासीहरूका लागि बस्ती मैदान र परिवार पुनर्मिलन केन्द्रको रूपमा देखिन्छ। तपाईंलाई थाँहा थियो?… यस छिमेकमा लोकप्रिय मालिअन आप्रवासीहरु को परिवार शामिल छ Moussa Sissoko र एन'कोलो कन्टे.
मोसा डेम्बेले धनी परिवार पृष्ठभूमिमा हुर्केकी थिइनन्। कान्ते जस्तै, उनका बुवा र आमा धेरै मानिसहरू जस्ता थिए जसले मेनुअल रोजगारहरू गरे तर उत्तम वित्तीय शिक्षा थिएन, प्रायः जसो पैसाले स .्घर्ष गरिरहेका थिए। मौसा डेम्बेले पेरिसको उत्तरमा एउटा सानो गाउँमा हुर्केकी थिइन्। उनको बहिनीको साथ इन्स्टाग्रामको नाम डेम्बीज बल्ला र जेठो दाजु पनि छ जसको बारेमा धेरै कम जानकारी छ।
माउसा डेम्बेले आफ्नी बहिनी पापको साथ हुर्किए।
सानो बच्चाको रूपमा, मोसा डेम्बेले एकदम आरक्षित थियो, जसलाई अक्सर सामाजिक रूपमा छोडिन्थ्यो। ऊ आफ्नो पोन्टोइज टोलमा अन्य केटाकेटीहरू जत्तिकै गतिविधिमा छैन। साथीहरूसँग खेल्न डाइभिंग गर्नुको सट्टा, डेम्बेले पछाडि उभिनुभयो र अर्को बच्चालाई उसको ठूलो बहिनी र भाइ लगायत हेर्नुहोस्। यस व्यवहारको परिणाम स्वरूप, ऊ साथीहरूको घरमा एक्लै आमन्त्रित हुँदैन।
मौसा डेम्बेले बचपन कहानी - शिक्षा र क्यारियर निर्माण:
जस्तै एन'कोलो कन्टे, एक लजालु व्यक्तित्व संग उसका साथी मालिआन, फुटबल खेल एक आत्मविश्वास बढाउने को एक स्रोत बन्न र डेम्बेले आफ्नो जीवनको वास्तविकताबाट टाढा आफ्नै भाग्ने मार्ग बने।
धन्यबाद, पुरानो फुटबल खेलाडीहरू र उसको उमेरका साथीहरू समक्ष, डेम्बेले कसरी आउटगोइंग, बोल्ड र विश्वस्त हुन सिक्यो किनकि उसले बलको साथ ठूला गुणहरू देखायो। स्कूलमा पढेको बखत पनि ऊ बिदा र खेलको समयमा फुटबल खेल्न जान्थ्यो। अझ, छुट्टीको समयमा, डेम्बेले बिहान र साँझको सबै घण्टा फुटबल खेल्न जान्थे।
यसमा कुनै समय लागेन डिम्बेलेलाई थाहा थियो कि उनीसँग एउटा प्रो जस्तो बनाउने प्रतिभा छ। फ्रान्स 1998 वर्ल्ड कपमा कालो आप्रवासीहरुको सफलताबाट प्रेरणा पाएर उनले फुटबललाई कठिनाइको सामना गर्न र परिवारको स्थितिलाई उकास्नका लागि प्रयोग गर्ने सपना देख्न थाले। डेम्ब्लेले आफ्ना स्कूलका शिक्षकहरूसँग उनको महत्वाकांक्षाको बारेमा छलफल गरे जसले उनलाई प्रोत्साहनका साथ यसो भनिरहे - खेल प्रति उनको समर्पण एक लगानी थियो जुन कडा परिश्रम र दृढ संकल्पको माध्यमबाट उसलाई एक पेशेवर फुटबलर बन्न सहयोग गर्दछ।
स्कूलको कक्षा पछि विश्वासी दिन माउसा डेम्बेले पोन्टोइजको स्थानीय क्षेत्रहरूमा गए जहाँ उनलाई नजिकैको टूर्नामेन्टमा आमन्त्रित गरियो। टुर्नामेन्ट पछि जुन उनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे, उनको बारे समाचार उनको स्थानीय क्लबमा पुग्यो। उनको स्थानीय परिवार यु एस सर्गी क्लोसले ट्रायलमा सहभागी हुन बोलाइएको हुनाले उनको परिवारको आनन्दको सीमा नै थिएन।
मौसा डेम्बेले बचपन कहानी - प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
स्थानीय क्लब युएस क्लर्डी क्लोसको साथ एउटा परीक्षण प्राप्त गर्दै - जुन यो सुन्दा सरल थिएन। मोसा डेम्ब्लेका दाइले उनीहरूलाई मुद्दा चलाउनु भन्दा पहिले हस्तक्षेप गर्न कोसिस गर्यो। उनको शब्दहरूमा, अनुसार FourFourTwo;
“जब मेरो भाईले सामेल हुन खोज्यो, उनीहरूले भने कि तिनीहरू उनलाई चाहँदैनन्। उनीहरूसँग पहिले नै धेरै धेरै खेलाडीहरू छन् ख्याल गर्न। तर मेरो भाइले जिद्दी गरे: 'उसलाई एउटा प्रशिक्षण सत्र दिनुहोस् र यो नै हो ...' त्यसो भए उनीहरूले गरे र कहिल्यै पछुताएनन्। "
6 वर्षमा उनीसँग सफल परीक्षण पाएपछि मौसा डेम्बेले एक्सएनयूएमएक्सको उमेरमा यूएस सर्गी क्लोज फुटबल एकेडेमीको हिस्सा बन्नुभयो। क्लबमा सम्मिलित भएपछि, उनी अगाडि स्थान खेल्नको लागि तैनाथ गरियो र तुरुन्तै, मैदानमा चमक दिन थाल्यो।
प्रत्येक खेलको अन्त्यमा, डेम्बेले यस्तो प्रकारको बच्चा थिए जसले कहिलेकाँही आफ्नो गोलहरूको संख्या हराउँदछ। उहाँ एक प्राकृतिक गोल स्कोरर हुनुहुन्थ्यो जो सधैं सही ठाउँमा सही समयमा हुन्थ्यो। युएस सर्गी क्लोसका लागि धेरै गोल गरेपछि उसको लोकप्रियता पीएसजीले याद गरेन। २००//२००2003 फुटबल सीजन पछि, सानो अग्रगमनले आफ्नो युवा क्यारियरमा अर्को चरणहरू लिए पेरिस सेन्ट-जर्मेन एफसी को युवा एकेडेमी संग आफ्नो फुटबॉल परिपक्वता प्रक्रिया जारी
मौसा डेम्बेले जीवनी तथ्य - फेम कथा फेम:
माउसा डेम्बेले स्कूल जान छोडे पनि उनलाई PSG द्वारा बोलाइएको थियो। भर्ना गर्नु अघि उनले आफ्नो प्राथमिक विद्यालय पूरा गरे ले मौलिन à भेन्ट कोलेज, पेरिस को उत्तरपश्चिम उपनगरहरु मा एक कम्यून, Cergy मा स्थित छ।
PSG मा, मौसा डेम्बेले 15-2010 सिजनमा U2011 पक्षमा शुरू भयो। गति र अन्त्यका उनका उत्कृष्ट गुणहरूले उनलाई 40 खेलहरूमा 30 गोल दागेर हेरे, यो उल्लेखनीय संख्या हो जसले आफ्ना शिक्षकहरूलाई धेरै प्रभावित गर्यो। 2012 मा, Dembele आफ्नो टीमका साथीहरु संग एक साथ; किंग्स्ली कोमैन, पेरिल किम्म्बेबी र एड्रियन रब्बोट (सबै तल चित्रित) दोहाको अल कास कपमा भाग लिन छानिएका थिए।
२०१२ मा अल कास कपका U17 PSG विजेताको दुर्लभ तस्बिर। मोसा डेम्बेले रबियट, कोमान, ओन्जेन्डा, किम्पेम्बे, मैग्नन र डेम्बेलेसँगै थिए।
टूर्नामेन्टमा, फ्रान्सेली स्ट्राइकरले धेरै निर्णायक गोलहरू गरेर बार्सिलोना बिरूद्ध गोल गरेर आफूलाई धेरै पटक अलग पार्यो। डेम्ब्लेको गोल-स्कोरिंग पराक्रमले उनको टीमलाई जित्नमा मद्दत पुर्‍यायो अल कास कप फाइनलमा जुभेन्टसलाई तल झार्दै दोहामा।
जब गइरहेको कठिन भयो: 2012 को शुरुमा, PSG टेकओवरको अफवाहहरू आयो र नयाँ अरबपति मालिकहरू द्वारा सुधार गरिएको (कतार खेल लगानी)। यो अफवाहले त्यो वर्षको मार्चतिर वास्तविकतालाई परिणत गर्‍यो। दुर्भाग्यवस, मोसा डेम्बेले ती मध्ये एक थिए जसले अत्यधिक मूल्या .्कन गरिए पनि, एकेडेमी स्नातक पछि पहिलो-टीम स्थान प्रस्ताव गरिएन। PSG केवल ठूलो बन्दुक खरीद गर्न मा रुचि थियो- मनपर्दो Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore, केविन गेमियो आदि
SADLY, डेम्बेले, क्लबलाई प्रतिष्ठित अल कास कप जित्न मद्दत गरे पनि NEVER ले PSG पहिलो टीमलाई बनाउन सकेन। कतार खेलकुद लगानी को नवगठित नगद सम्पन्न स्वामित्व अन्तर्गत आफ्नो क्यारियर पथ पहिले नै अवरुद्ध महसुस गरे पछि निराश स्ट्राइकरले आफ्नो गृहनगर क्लब बस्न निर्णय गरे।
मौसा डेम्बेले बायो - फेम टू फेम स्टोरी:
माउसा डेम्बेले जोखिमपूर्ण मार्ग लिई यति धेरै युवा विदेशमा सुरु गरे। 16 को उमेरमा, उनी अंग्रेजी डिभिजन2पक्ष, फुलहममा सम्मिलित भए जहाँ उनी एक्स्प्रेस भए नयाँ संस्कृति, प्रशिक्षण विधि र बानी। फुलहम यू १ team टीममा नियमितको रूपमा, डेम्ब्लेको प्रदर्शनले उनलाई क्लबसँगको पहिलो सत्रमा प्रीमियर एकेडेमी लीग पुरस्कार जितेको देख्यो।
Moussa Dembele फुलहम संग आफ्नो छाप बनाउने को रूप मा उनले फुटबल लीग को युवा प्लेयर पुरस्कार जीते।
फुलहमको क्रेभन कुटेजबाट डेम्बेलेको उल्का वृद्धि फ्रान्सेली यू २१ २१ राष्ट्रिय पक्षमा झल्किन्छ र यसले उनलाई फ्रान्स अण्डर २१ प्लेयर अफ द इयर अवार्ड जित्यो। स्थानान्तरण प्रस्तावहरू सम्मान प्राप्त गरे पछि कुनै समय मा आयो। सबै प्रस्तावहरू मध्ये, सेल्टिकको लागि प्रबल भयो किनकि डेम्बेले ब्रान्डन रोजर्स क्लबसँग पहिलो पटक हस्ताक्षर गर्‍यो।
उत्तर ध्रुवतिर यात्रा गर्दा डेम्ब्लेको लागि अर्को जोखिमपूर्ण मार्गमा स्कटिश प्रीमियर लिगमा फुटबलको व्यापारलाई निरन्तरता दिइयो, धेरै फुटबल प्रशंसकहरूको लागि यो अपरिचित लिग हो। मौसा डेम्बेले सेल्टिकका लागि चैम्पियन्स लिगमा निर्णायक भूमिका खेलेको थियो, समूह चरणमा म्यानचेस्टर सिटी (अन्तिम स्कोर 3-3) को साथ स्कोर सहित।
मौसा डेम्बेले च्याम्पियन्स लिगमा म्यान सिटीमा गोल गरेर ठूलो बृद्धि गरे।
शुरुमा साथी टोलीका साथी लेग ग्रिफिथ्सको पछाडि सीजनको शुरुआत गर्दै फ्रान्सेलीले १ net गोल गर्दै ब्रेन्डन रोडर्सको पहिलो नम्बरको हिटम्यानको रूपमा स्थापित गरे जसमध्ये। गोलहरू रेन्जर्सको बिरूद्ध भयो (सेल्टिककै सबैभन्दा ठूलो प्रतिद्वन्द्वी)। डेम्ब्लेका लक्ष्यहरू (32 खेलहरूमा 49 गोलहरू पछाडि ब्याक ह्याट-ट्रिकहरू सहित) टोलीलाई उनीहरूको प्रख्यात 2018 / 2019 ट्रेबल विनर सीजन जित्न मार्गदर्शन गर्नुभयो। यस विजयले फ्यानहरूले उनलाई नायकको रूपमा लेबल लगाएको देख्यो।
सेल्टिकको साथ मात्र १ सत्रमा, मौसा डेम्बेले tr ट्राफियां र 1२ गोलहरू बनाए।
ट्रेबलको जीतले डेम्बेले आफूलाई युरोपेली क्लबहरूमा उच्च घोषणा गर्ने देख्यो। 31st अगस्त अगस्त 2018 मा,6फुट स्ट्राइकरले आफ्नो देश फर्कने समय तय गर्‍यो, यस पटक लिग 1 क्लब लियोनको लागि हस्ताक्षर गर्दै।
स्वेट रेभेंज: मौसा डेम्बेले PSG मा बदला लिनको लागि कुर्दै थिए र त्यो क्षण अन्ततः ल्योनमा सामेल हुने6महिना भन्दा कममा भयो। केहि PSG फ्यानहरूको लागि, उनीहरूको बिरूद्ध प्रतिस्पर्धी प्लेयर स्कोर हेर्नु भनेको खेलको अंश र पार्सल हो. तर माउसा डेम्बेले हेर्दै (जो पहिले उनीहरूसँग खेल्थे) स्कोरिंग निराश दुबै प्रशंसक र खेलाडीहरू। मौसा डेम्बेले आफ्नो पुरानो क्लबको बिरूद्ध उत्सव मनाए जसले एक पटक उनीमा विश्वासको कमी देखाए।
मौसा डेम्बेले PSG मा एक फिर्ती प्राप्त गर्‍यो, गोलकीपरलाई निद्रामा राख्यो र सबै क्लबहरूको ठूलो पैसा लगानी मौन गर्‍यो।
डेबमेलको लियोनको समयदेखि नै बलिदानले निश्चित रूपले यसको भुक्तान गरिसकेको छ। PSG को बिरुद्ध ख्याती पछि, उनले आफ्नो जारी राखे उल्का वृद्धि, एउटा यस्तो उपलब्धि जसले उनलाई युरोपेली फुटबलको सबैभन्दा चर्चित युवा गुणहरू मध्ये एक बनायो। ल्योनमा डेम्बेलेको वृद्धि केवल त्यससँग तुलना गर्न सकिन्छ करीम बेंजमा र अलेक्जेन्डर लेकाजेट जो उनको ल्योन फ्रेन्च वरिष्ठ छन्।
मौसा डेम्बेले फेम कथामा उठ्न।
बाँकी, हामी सधैं भन्छौं, अब इतिहास हो।
मौसा डेम्बेलीको प्रेमिका को हो?
धेरै बर्षमा प्राप्त सबै सफलताहरूको साथ, यो निश्चित छ कि फुटबल प्रशंसकहरूले चिन्तित गरेको हुनुपर्छ जो मोसा डेम्बेलेको प्रेमिका हुन सक्छ। त्यहाँ कुनै तथ्यलाई इन्कार गरीरहेको छैन कि उसको प्यारा / सुन्दर देखिन्छ आफ्नो खेल शैली को साथ मिलेर उसलाई हरेक महिला प्रेमी इच्छा सूची को शीर्ष मा राख्दैन।
प्रशंसकहरूले Moussa Dembele प्रेमिका को हुन को लागी पूछताछ गरेका छन्।
इन्टरनेटमा धेरै अनुसन्धान पछि, यो लेख्ने समयमा देखा पर्दछ, Mousa Dembele को लागी आफ्नो प्रेमिका वा पत्नी को प्रकट नगर्ने एक सचेत प्रयास गरेको छ (त्यो यदि ऊ पहिले नै विवाहित छ भने)। वा यो हुन सक्छ कि ऊ एक्लो छ, जसले एक वैगको अस्तित्वलाई जनाउँदछ।
हामीलाई थाहा छ कहिलेकाँही फुटबल अन-माफ गर्न सकिन्छ विशेष गरी जब यो सम्बन्धको मामलाहरूमा यसलाई मिसाउने कुरा आउँदछ। यस कारणले गर्दा, यो हुन सक्छ कि मौसा डेम्बेले केवल एक क्याजुअल प्रेमिका वा जोकी पत्नीको सामग्री खोज्ने भन्दा उसको करियरमा ध्यान केन्द्रित गर्न रुचाइन्छ।
मौसा डेम्बेले व्यक्तिगत जीवन:
मोसा डेम्बेले व्यक्तिगत जीवन तथ्यहरू चिन्नुले तपाईंलाई उसको व्यक्तित्वको पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
पहिले भनेझैं, मोसा डेम्बेले लजालु र शान्त जन्म लिइन् तर पछि उनी जीवनमा आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने कारणहरू फेला परे किनकि उनी ठूला र शक्तिवान भए। उनको सफलताको कथा बलिदान बिना आए। वर्षौंको दौडान, डेम्बेले फुटबल फ्यानहरूमा प्रमाणित गरे कि उनी सजिलैसँग मिल्दछन् उर्जा सजिलैसँग मिल्दछन्, जुन उनी इ England्गल्याण्डको स्कटल्याण्डको यात्राबाट देखिए। मौसा डेम्बेले भविष्य बुझ्न सक्षम छ र उसलाई आफूले चाहेको कुरा ठ्याक्कै थाहा छ, उनी कहाँ हुन्छन् र लेखनको समयदेखि उसले पाँच वा दश बर्ष सम्म के गर्दैछ।
आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको अर्को पृष्ठमा, मोसा डेम्बेले तोडिएका प्रतिज्ञाहरूलाई घृणा गर्छन् किनभने उनी पीएसजी एकेडेमीमा हुँदा एक पटक यसको शिकार भएका थिए। त्यस कारणले गर्दा, उहाँसँग अब एक वाचवर्ड छ जुन निम्न रूपमा जान्छ;
मानिस बिना उसको वचन केहि छैन (कुनै मानिस छैन).
मोसा डेम्बेले व्यक्तिगत जीवनलाई फुटबलबाट टाढा जान्न।
मौसा डेम्बेले जीवन शैली:
लेखेको समयमा, मौसाले प्रति हप्ता 48,000 कमाउँछ। यो यति धेरै पैसा हो, उसको लागि एक विदेशी जीवन शैली बाँच्नको लागि पर्याप्त। जे होस्, उसको सामाजिक मिडिया खातामा माउसा डेम्बेले पोस्टबाट आफ्नो वित्त प्रबन्ध गर्नमा स्मार्ट छ र dव्यावहारिकता र रमाईलो बीचको ईक्विडिंग हाल उसको लागि गाह्रो विकल्प छैन। त्यहाँ फ्ल्याश कार, मन्सन, बूज, लेडीज आदि को कुनै संकेत छैन।
मौसा डेम्बेले जीवनशैली- उनी लेखनको समयमा एक्जोटको रूपमा बाँच्दैनन्।
आफ्नो जीवनशैलीमा पनि, मौसा डेम्बेले एक त्यस्तो व्यक्ति हुन् जसले आफूलाई धेरै फरक मान्छेहरूको कम्पनीमा भेट्टाउँछन्। एक समय लजालु र शान्त केटाले आफूलाई काममा सामाजिक जमघट सम्म सबै कुरामा पहिलो हुन चाहान्छ।
मौसा डेम्बेले जीवनशैली- ऊ सामाजिक हो र अब साथीको वरिपरि हुन सिकेकी छ।
मौसा डेम्बेले पारिवारिक जीवन:
मौसा डेम्बेलेको पारिवारिक सफलता फुटबलमा बनाएकोमा उनीसँग (रोटी खाने) बन्धनमा छ। लेखनको समयमा, डेम्बेले परिवारका सदस्यहरूले प्रख्यात व्यवहार गर्न रणनीतिहरू प्रयोग गरेका छन् जुन उनीहरूको परिवारका एक सदस्य सफल हुन आउँदछ।
लेख्ने समयमा, सबै परिवारका सदस्यहरू (आमा, बुवा, भाइ, बहिनी, आदि) फ्रान्समा निजी र कम-कुञ्जी जीवन बिताएर मोसाको सफलताको प्रबन्ध गर्दै छन् पपरराजी सधैं प्रहारमा र सामाजिक मिडियासँग कनेक्ट हुने धेरै तरिकाहरूका साथ। जबकि मौसा डेम्बेलेका आमा बुबा र भाइको सामाजिक मिडिया पृष्ठ अज्ञात छ, जेठी दिदीको पहुँचयोग्य छ तर निजी सेट (लेख्ने समयमा) ताकि केवल अनुमोदित अनुयायीहरूले देख्न सक्दछन् कि उनी के साझेदारी गर्दछन्।
मौसा डेम्बेले सिस्टरसँग उनको इन्स्टाग्राम खाता निजी छ ताकि केवल अनुमोदित अनुयायीहरूले देख्न सक्दछन् कि उनी के साझेदारी गर्दछन्
मौसा डेम्बेले अनटोल्ड तथ्यहरू:
10 सर्वश्रेष्ठ DEMBELES (2019): उपनामका साथ एक मुट्ठीभर फुटबलरहरू छन् भन्ने यो लामो समाचार छैन 'Dembele'। नाम 'Demeble'पश्चिमी अफ्रिकी परिवार मूलका फुटबलरहरूमाझ लोकप्रिय छ, प्रायः मालीको देशबाट। यस सत्रमा, हामीले 10 खेलमा उत्कृष्ट Dembeles राखेका छौं।
LifeBogger सयौं विश्व फुटबल को १० सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ Dembeles रैंकिंग प्रस्ताव छ।
तिनीहरू १: १ समावेश गर्दछन् Ousmane Dembele, २ - हाम्रो आफ्नै मौसा डेम्बेले, - - मौसा डेम्बेले, - - करमोको डेम्बेले, - - माना डेम्बेले, - - सिरिकी डेम्बेले, - - मलाली डेम्बेले, - - बिरा डेम्बेले, - - महामादौ डेम्बेले र १० - एलियु डेम्बेले।
नेत्रगोल अभिव्यक्ति: माउसा डेम्बेलेका लागि, फुटबल खेलहरूमा तनावपूर्ण क्षणहरूमा आफ्ना आँखाहरू सामान्य राख्नु लगभग अपरिहार्य छ। यो धेरै सम्बन्धित छ फिल जोन्स ' उस्तै क्षणहरूमा अनुहारको भाव।
मोसा डेम्बेले नेत्र अभिव्यक्तिहरूको संग्रह।
मौसा डेम्बेले आँखाहरूमा जैविक स्पष्टीकरण: उसको आँखाको बल्ज अनैच्छिक कार्यको परिणाम हो जुन स्नायु संचार र मांसपेशीको स cont्कुचन धेरै समावेश गर्दछ। यो फुटबल खेलहरूमा तनावपूर्ण क्षणहरूमा मात्र हुन्छ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो माउसा डेम्बेले बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यांकहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।